Voaroaka Noho Ny Fiaraha-miasa Tamin’ny Fampitam-baovao Tsy Miankina Ilay Kiobàna Mpanao Gazety Sady Mpikatroka LGBT · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2016 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Tetun, Español, Deutsch, English
Nanome ny seho farany tao amin'ny Onjam-peo Sagua ny 3 Septambra 2016 i Maykel González Vivero, mpanao gazety ao amin'ny Onjampeo Kiobàna sady bilaogera rehefa nofaranan'ilay onjampeo ny taratasy fifanarahana taminy noho ny “fiaraha-miasan'i González tamin'ny fampitam-baovao tsy miankina.”
Miaraka amin'ny asany ny fitantarana mahazatra ny fandaharana, “Por La Villa de Undoso,” izay mitrandraka ny tantara ao an-toerana ao an-tanànan'i Sagua La Grande, nilaza ho pelaka ampahibemaso ilay bilaogera 32 taona, miara-miasa amin'ny fampitam-baovao sy vondrona mpahay haisoratra ao Kiobà, sady mpikambana mavitrika ao amin'ny vondrona tsy miankina mpiaro ny zon'ny LGBT Proyecto Arcoiris ihany koa.
Nanao tatitra tao amin'ny zoro fampahalalam-baovao maro i González izay nohelohin'ny talen'ny onjampeo Sagua Carlos Orlando Manrique miharihary ny asany miaraka amin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina Kiobàna ka anisan'izany ny Diario de Cuba. Manao fanakianana miharihary ny governemanta Castro ny Diario de Cuba ary manana mpandray anjara ao Kiobà sy Etazonia. Voasakana vao haingana ny tranonkala tao amin'ny nosy, araka ny CubaNet (tranonkala iray hafa nosakanana) sy ny ifandraisan'ny Global Voices ao amin'ny firenena.
Tao amin'ny fijoroana vavolombelona ho an'ny daholobe tao amin'ny Facebook, namariparitra ny zava-niainany tao amin'ny onjampeo Sagua i González. Nanomboka tamin'ny 2012 ny olana, raha notsikerainy ny asan'i Mariela Castro Espín, ilay zanakavavin'ny Filoha Kiobàna Raúl Castro, izay mitarika ny Foibe Nasionaly ho an'ny fanabeazana Ara-pananahana ao Kiobà ary mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena koa. Nanatevin-daharana ireo mpanandra-teny hafa mahaleotena i González tamin'ny fitsikerana an'i Castro amin'ny fiarovana ny zon'ny LGBT, nandresy lahatra izy fa tsy nahomby ny ezaka nataon-dravehivavy tamin'ny olana manan-danjan'ny vahoaka, indrindra eo amin'ny fanambadian'ny lahy sy lahy, vavy sy vavy ary ny firaisan-trano. Hoy izy nanoratra:
Miahiahy i González araka ny filazany fa tsy nanampy azy ihany koa ny nitsikerany an'i Marino Murillo mpikambana ela nihetezana ao amin'ny antoko komonista Marino Murillo, izay efa Minisitry ny Drafitra sy ny Toekarena maharitra tao Kiobà teo anelanelan'ny 2009 sy 2016. Notendrena imbetsaka hanao asa samihafa ao anatin'ny fikambanana fampitam-baovaom-panjakana izy taorian'ny taona 2012, ary avy eo nanomboka nanohy asa tany ivelan'ny andrim-panjakana. Tamin'izay fotoana izay, nilaza taminy ny manampahefana iray fa:
Raha tsy manam-paharoa ny kaonty manokana mitantara ny zavatra niainan'i González, dia tsy izany kosa ny zava-misy sarotra atrehiny. Manana ampahany betsaka ihany ireo mpanao gazety tao amin'ny fampitam-baovaom-panjakana Kiobàna tao amin'ny nosy na tany ampitan-dranomasina ao amin'ny vondrona mpibilaogy momba an'i Kiobà. Anelanelan'ireo fandroahana mpanao gazety vao haingana toa an'i González sy Jose Ramírez Pantoja, ankoatra ireo hafa, sy ny fanamelohana ofisialy an'ilay bilaogera Orogoaiana sady mpanao matoandahatsoratra teo aloha tao amin'ny BBC, Fernando Ravsberg , izay niasa ho mpanao gazety tao Kiobà nanomboka tamin'ny taompolo 1990s, dia hita taratra fa mety mbola hisy ny hanara-dia azy ireo.